छड्के : हामीलाई घट्दो क्यामेरा मोह :: Press Chautari ::
हामीलाई घट्दो क्यामेरा मोह
२००९ सालको मध्येतिर एटलान्टा (जर्जिया) बाट पोको पन्तुरो बोकेर न्युयोर्क उक्लिएको केहि दिनमै म्यानह्याटनमा अवस्थित बि एण्ड एचमा क्यामेरा खरिदको लागि छिरे । त्यहाँ बडेमानको श्रव्य-दृश्य सामाग्रीहरु देखेर म धेरैबेर अचम्ममा परे । कम्प्युटरबाट गर्न मिल्ने अनलाईन पत्रिकाको लागि सम्पूर्ण काम एटलान्टा बस्दै फत्ते भईसकेको थियो । हुन त एटलान्टाबाटै एउटा सोनीको पोर्टेबल एचडी फर्मेटकै भिडियो क्यामरा पनि च्यापेर न्युयोर्क हान्निएको थिए । बि एण्ड एचको भव्य बजारमा मैले अनेक थरीका क्यामेराहरु देखें, जो जीवनमा कहिल्यै देखेको थिईन । नेपालमा बरिष्ठ चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले मेघा सिरियल “दर्शन जिन्दगीको” छायाँङ्कन ताका 'एक्स एल-१' नामक क्यामेरा प्रयोग गर्नु भएको याँद थियो मलाई । बि एण्ड एचमा पनि त्यो क्यामेरामा आँखा पर्यो । मन थाम्नै सकिन । उत्तिबेला त्यो क्यामेराको झोला, हात, खुट्टा, आँखा, नाक, कान सबै सबै गरेर ६८ सय डलर परेको थियो । त्यहि दिन हुनु पर्छ फोटो खिच्नको लागि निकोनको डि-५००० र त्यसको पनि कानखुर गर्दा १७ सय डलर जत्ती परेको थियो । एकैदिनमै साढे आठ हजार डलरको क्यामेरा सामाग्री किनेर बि एण्ड एचबाट बाहिरिएको थिए । आधा-उँधी क्यापीटल वानको पत्ता घोँटे र बाँकी चाँही नगद नै बुझाएको अझै झल्झली याँद छ मलाई । त्यसपछि बिभिन्न समयमा श्रव्य-दृश्य सामाग्री खरिदको लागि बि एण्ड एचमा गई बस्ने गर्छु अझै पनि ।
मलाई याँद छ । मैले मेरो अनलाईन (प्रेस चौतारी डट कम ) सूचारु गरेपछि पहिलो चोटी कुईन्स प्यालेसमा आयोजित वालुङ समाजको एक कार्यक्रममा ति सबै क्यामेरा सामाग्री प्रयोगमा ल्याएको थिए । मेरो क्यामेराको भारी देखेर हो कि किन हो तात्कालिन समाजका अध्यक्षले कार्यक्रम सकिए लगतै गेटमा यसो भने–“कार्यक्रममा आई दिनु भो, हामीले कति गरौं ?” पैशा कति दिऊँ ? भन्ने आशयमा वहाँको सोधाई थियो । मैले भने -“यो त मेरो काम हो, समाचार संकलन र प्रकाशन गर्नु ।” “होइन खाली हात के पठाउँनु भनेर नि” अध्यक्ष बोले । नाइनास्ती गर्दै सहयोग चाहिए पछि भेटौला भनेर त्यहाँबाट बाहिरिए । रमाइलो सम्झना छ त्यो ।
त्यसपश्चात् भने हरेक नेपाली कार्यक्रमहरुमा आउने जाने क्रम बढयो । सहकर्मी साथीहरु भेटिए । भेटकै क्रममा लामो कपाल पालेर पछाडी चुल्ठो बाँधेका पत्रकार मित्र भेटिए । तिनी अहिलेका प्रदिप थापामगर रहेछन् । त्यत्तिबेला उनले सोनीको डिएसएलआर बोक्थे । कार्यक्रम अवधीभर सबै अतिथि, कलाकार, बक्ता कसैको नछुटाई गोटागन्ती फोटो खिच्थे उनी । न्युयोर्कमा 'ग्रुप फोटो', 'ग्रुप फोटो' भनेर प्रचलनमा ल्याउने पनि उनै थापा जी हुन् । कति कार्यक्रमको मेनुको पुच्छरमा देखेको छु -'ग्रुप फोटो' ।
आफुसँग गतिलै भिडियो क्यामेरा भएको कारण त्यत्तिबेला धेरै कार्यक्रमहरुको भिडियो सामाग्रीहरु बनाएको छु । उत्तिबेला नै मणि बाङ्देल दाजुसँग मिलेर “हेल्लो न्युयोर्क” भन्ने अनलाईन टेलिभिजनको कार्यक्रम पनि निमार्ण गरेका थियौं, जुन धेरैले मन पराएका पनि थिए । अब त्यो सम्झना मात्रै हुने भो । यु ट्युवमा कहिले काही हेर्छु, स्वाद फेर्छु ।
प्रदीप थापा भेटिएकै समयमा अर्का पत्रकार पनि भेटिए-बिजय पौडेल ।
उनीसँग निकटता बढ्दै जाँदा धेरै कार्यक्रमहरुमा आयोजकहरुले सँगै आसन ग्रहण गराएकाछन् । नाम ठ्याक्कै याद छैन तर त्यत्तिबेला उनले पुरानो मोडलको लेन्स बिनाको सानो क्यामेरा बोकेर हिड्थे । उबेलाका लाहूरे मामाहरुले जस्तै घाँटीमै झुण्डाएर कार्यक्रममा आउँथे । लेन्स थिएन स्टेज छेउमै पुगेर फोटो खिच्थे । हामी ठूला क्यामेरा वालाहरुलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्थे । प्रदीपको जस्तो कार्यक्रम अवधीभर बस्ने उनको आदत कहिल्यै बसेन जो अझै कायम छ ।
उबेला अर्का पत्रकार आङ्छिरिङ शेर्पासँग पनि आकारमा ठूलो फोटो खिच्ने यन्त्र थिएन । फोटोग्राफर आङ्कामी शेर्पाकै सौजन्यमा फोटोहरु पत्रिकामा छाप्थे । धेरै पछि हुनुपर्छ उनले सोनी कम्पनीको डि-९० क्यामेरा खरिद गरे । क्यामेरा सञ्चालनमा त्यत्ति अनुभव नभएको भन्दै कहिले काही सहयोग माग्थे । जाने बुझे सम्म भनि टोपल्थें । याँद भएसम्म उनले धेरै समयसम्म उनले त्यहि क्यामेरा बोकेर हिडें ।
त्यत्तिबेला देखि नै न्युयोर्कमा भिडियो र फोटोग्राफीमा शम्भु मोक्तान अगाडि थिए । उनी व्यावसायीक र भव्य सामाग्रीहरु चलाउँथे जो अझै कायम छ । उनीसँगै आङ्कामी शेर्पा (फोटो हेर डट कम) ले राम्रा र आकर्षक तस्बिरहरु खिच्थे । अलि पछि अशोक पन्तले पनि न्युयोर्कमा फोटोग्राफीमा राम्रै कौशलता देखाए । शेर्पा र पन्त अझै सक्रिय छन् । उनीहरु चाहि भारी पुग्ने क्यामेरा भिरेरै हिड्ने गरेकाछन् । उता भिडियो क्यामेरासँगै देखिन्छन श्याम श्रेष्ठ पनि । आवश्यक तस्बिर सामाग्रीको लागि उनी पनि आईफोनकै प्रयोग गर्ने गर्छन ।
पछिल्लो समयमा पत्रकारहरु किशोर पन्थी, सूर्य थापा र सुरेश शाहीले व्यावसायिक क्यामेरा बोक्ने गरी न्युयोर्कमा पत्रकारिता गरेनन् । भिडियो वा फोटो सामाग्रीको लागि छुट्टैलाई जिम्मा दिएर उनीहरुले टेलिभिजन र पत्रिका सञ्चालनमा ल्याए । फोटो सामाग्रीको लागि आङ्कामी शेर्पा र अशोक पन्त भरपर्दाे भए । उनीहरुबाहेक मान राना मगर, लब के. थापामगर, श्याम बुढा, लाल तामांग, महेश्वर श्रेष्ठ लगायतले अझै गतिलै क्यामेरा बोकेर हिड्ने गरेकाछन् । माथि उल्लेखित क्यामेरावाहकसँगै कार्यक्रम आयोजक स्वयम्ले राम्रा र स्तरिय तस्बिरहरु सौजन्यमा पाए पछि हामीमा क्यामेरा मोह घट्दै गएको सत्य अचेल हामी सबैले स्वीकार्ने गरेकाछौं ।
बडेमानको झोलामा क्यामेराको सबै अंग बोकेर लखतरान हिड्नु कम्ती गाह्रो थिएन । बिस्तारै क्यामेरा मोह घट्दै गयो । तिथि यकिन छैन तर ३ बर्ष अगाडि ६८ सयको भारी क्यामेरा र त्यसका अंग-प्रत्याङ्ग जडौरीको भाउँमा पुनः बि एण्ड एस मै बुझाएर फर्किए । फोटो खिच्ने सोनी क्यामेरा चाँहि दुई साल अघि नेपाल गएको बेला बिनोद मगरलाई बेचेंर भ्याकेसनमा खर्चिए ।
उता बिजय पौडेललाई बेला बेला उनको क्यामेरा बोकाई देखेर जिस्काउँथ्यो हामी । कुन झोंकमा हो कुन्नी उनले पनि दुई बर्ष अघि गतिलै क्यामेरा खरिदेछन् । तर प्रयोगमा त्यत्ति ल्याउँदैनन् । कुनै बेला पत्रकार दिनेश जंग शाहले पनि राम्रै क्यामेरा बोक्ने गर्थे । रिपोटिङ्गमा त्यत्ति नदेखिने शाहको क्यामेराले नेपाली समुदायका थोरै तस्बिरहरु मात्र खिचेंका होलान् । उता विष्णु पौडेल कार्यक्रममा क्यामेरासँगै आकल, झुकल देखिन्छन् । तर सहदेव पौडेललाई भने क्यामेरा मोह गज्जबले लागेको छ अचेल । हाल उनले फोटोग्राफीकै लागि भनेर वेज पेजसमेत निमार्ण गरेकाछन् । पौडेल जस्तै ङिमा पाख्रिन पनि साथमा क्यामेरा प्रायः छुट्टाउँदैनन् । उनले अहिले निकोन कम्पनीकै गतिलो क्यामेरा बोक्ने गरेकाछन् । समाचारको लागि चाहिने फोटोको जोहो आफैले गर्छन ।
यता सहदेव पौडेल र ङिमा पाख्रिनले साथमा क्यामेरा नटुटाउँदा उता प्रदीप थापामगरलाई क्यामेरा मोह स्वात्तै घटेको छ । उनले पनि धेरै पछि खरिदेका डि-५१०० सोनी क्यामेरा थन्काएर हाते फोनबाट चलाई रहेकाछन् ।
हाते फोटबाटै आवश्यक तस्बिरहरु खिचेर काम चलाईरहेका मध्येमा किशोर पन्थी अगाडि छन् । थापा र पन्थी दुवैले एप्पलको आईफोन ५ ले नै पत्रिका र अनलाईनमा तस्बिर छाप्ने गर्छन । डि-९० चलाउने रहर नपुर्याई अर्का पत्रकार आङछिरिङ शेर्पाले सामसुङ्को नोट-१ मा झरे, म स्वयम् सामसुङ्कै नोट-२ बाट काम चलाउँदै आएका छु । टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका शैलेश श्रेष्ठले आईफोन-४ एसको हातेफोनलाई आवश्यक दृश्य सामाग्री कैद गर्ने गर्छन् ।
अहिलेको हाई रिजुलेसन र मेघा पिक्सेल आईफोन र एन्ड्रोइड फोनको कारण भारी क्यामेराहरुको खाँचो त्यत्ति नपरेको सबैको यकिन हो । न्युयोर्कमा गुणस्तर तस्बिरको लागि आङकामी शेर्पा र अशोक पन्तको भर थेककै कारण पनि हामीलाई क्यामेरा मोह घटेको अर्काे कारण हो ।
हाई रिजुलेसन र मेघा पिक्सेलकै लागि हो भने अचेलका एप्पल र एन्ड्रोइट फोनहरु सजिला र उपयोगी मानिन्छन् । यद्यपी मेनुयल फंकसन र लाईटिङ्गको लागि भने हेर्दा गतिला लाग्ने व्यावसायिक क्यामेराहरु नै आवश्यक छ । यसरी हाते आईफोन र एन्ड्रोइट फोनबाटै फोटो खिच्नेहरुमा योगेश आदि, मनु लोहोरुङ, राजन थपलिया, भुपेन्द्र थापा, गीता पन्थ लगायत धेरै छन् ।
गज्जब छ होइन त, हेर्दा राम्रो, बोक्नलाई छरितो काम लगभग उस्ता उस्तै । चाहेको दृश्य हतारमै किन नहोस् कैद गर्न भ्याएकै छ । त्यहिबाट तुरुन्तै बिभिन्न सोसियल मिडिया र अनलाईनमा पोष्ट/अपडेट गर्न नि सजिलो । कार्यक्रम सकेर झोला कस्नु नि नपर्ने । 'धन्यवाद' भन्यो गोजीमा खत्रक्क हाल्यो हिड्यो ।
कि हलो-हलो गर्दै बाटो काट्यो । या त कानमा ठेडी घुसारेर मन लाग्दो गीत सुन्दै हिड्यो । झन्झट कम, उपयोगीता धेरै ।
सस्तो, सजिलो र सूलभ छैन त यी हाते फोनहरु यता फेसबुकमा पोष्ट गर्न अनि ट्वीटरमा ट्वीट गर्न ?
"अन दि स्पट–लाईभ ।"
(पुनश्चः प्रसंगबस लेखमा न्युयोर्कमा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई मात्र लक्षित गरेर छड्के गरिएको छ )
शुक्रवार, २०७१ जेष्ठ २३ गते १९:५७ / Friday, Jun 06, 2014 7:57 pm